ဂျပန်ကတ်ကြေး - ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးနှင့်ဘာဘာညှပ်များ
ကျွမ်းကျင်သောဆံပင်ညှပ်ကတ်ကြေး၊ ပါးလွှာသောကတ်ကြေး၊ ဆံပင်ညှပ်နှင့်သင်တုန်းများ ၀ ယ်ပါ။ ၆၀ အထိရောင်းသည်% Off!
ဆံပင်ညှပ်ဖြတ် ဆံပင်ပါးလွှာသောကတ်ကြေး လက်ဝဲလက်ညှပ် ဆံပင်အိတ်များနှင့်ပစ္စည်းများ သင်တုန်းခုတ်လှဲ / ရိတ်ခြင်း ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ & အမှုများ
4.5 "ကတ်ကြေးအရွယ်အစား 5.0 "ကတ်ကြေးအရွယ်အစား 5.5 "ကတ်ကြေးအရွယ်အစား 6.0 "ကတ်ကြေးအရွယ်အစား 6.5 "ကတ်ကြေးအရွယ်အစား 7.0 "ကတ်ကြေးအရွယ်အစား
ကတ်ကြေးအစိတ်အပိုင်းများ, holsters နှင့်အမှုများ
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆံပင်ကတ်ကြေးများ ၀ ယ်သောအခါ၎င်းတို့ကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်ကာကွယ်ရန်မှန်ကန်သောဆက်စပ်ပစ္စည်းများလိုအပ်သည်။ သားရေ holsters, ကတ်ကြေးနှင့်အိတ်များ, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုပစ္စည်းများနှင့်ကိရိယာတန်ဆာပလာများကိုဂျပန်ကတ်ကြေးတွင်ရရှိနိုင်သည်။
သြစတြေးလျ၊ နယူးဇီလန်၊ အမေရိကန်၊ ကနေဒါ၊ ဥရောပ၊ ယူကေနှင့်အာရှရှိဆံပင်အလှပြုပြင်သည့်ကတ်ကြေးများကိုအွန်လိုင်းတွင် ၀ ယ်နိုင်သည်။
- လွယ်ကူသော ၇ ရက်ပြန်လည်ရောက်ရှိသည်
Japan Scissors သည်လုံခြုံစိတ်ချရသောအွန်လိုင်းငွေပေးချေမှုများတွင် Paypal, AfterPay, ZipPay, Sezzle နှင့် Credit Card များပါဝင်သည်။
ကိုလိုက်ရှာနေသည် လွယ်ကူသောပြန်လည်ရရှိမှု၊ တစ်သက်တာအာမခံနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကတ်ကြေးတံဆိပ်များကဲ့သို့သော Jaguar, JoewellJuntetsu၊ Ichiro, Yasaka နှင့် Kamisori ညှပ်။
သင်သည်ဂျပန်ကတ်ကြေးမှဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်း (သို့) ဆံပင်ညှပ်ညှပ်ညှပ်စက်ကို ၀ ယ်သောအခါသင်မှာယူမှုကိုလက်ခံလိမ့်မည် ဘယ်နေရာမှာမဆိုအခမဲ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ!
Australia Post, Japan Post, UPS သို့မဟုတ် FEDEX International ။
ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်း (သို့) ဆံပင်ညှပ်ကတ်ကြေးဆိုတာဘာလဲ။
offset ergonomics သည်အထူးသဖြင့်နေ့စဉ်ဖြတ်တောက်သောဆံပင်အလှပြုပြင်သူများအတွက်ကတ်ကြေးများကိုပိုမိုသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေရန်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
ရှည်လျားသောဓါး၊ ဓါးတို၊ ဖြတ်ခြင်း၊ တုံးဖြတ်ခြင်း၊ ပါးလွှာခြင်း၊
မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းဆိုင်ရာကတ်ကြေးများနှင့် ပတ်သက်၍ မကြာခဏမေးလေ့ရှိတဲ့မေးခွန်းများ
ဝယ်ဖို့ရှာဖွေနေသည့်အခါ ဆံပင်အလှပြုပြင်ရေးကတ်ကြေး, ဆံညှပ်နှင့်သင်တုန်း အွန်လိုင်းတွင်၎င်းသည်ရရှိနိုင်သည့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၊ စတိုင်များနှင့်ရွေးချယ်မှုများစွာနှင့်လွှမ်းမိုးနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏နှစ်ပေါင်းများစွာဖောက်သည်၏တုံ့ပြန်ချက်နှင့်ညစာအပေါ် အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပတ်သက်၍ အများဆုံးမေးမြန်းထားသောမေးခွန်းများကိုစာရင်းပြုစုရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းနှင့်ဆံညှပ်!
အွန်လိုင်းပေါ်တွင် ၀ ယ်သည်ဖြစ်စေ၊ ဆိုင်တွင်ဖြစ်စေဖြစ်စေဆံပင်အလှပြုပြင်သည့်ကတ်ကြေးအရွယ်အစားကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်အဆင်ပြေပြီးဖြတ်တောက်ခြင်းနည်းစနစ်အားလုံးအတွက်အလုပ်လုပ်သည်။
ဆံပင်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်: ဆံပင်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်များသည်ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်သို့မဟုတ်အလှပြင်ဆိုင်များတွင်သင်တွေ့နိုင်သည့်အခြေခံအကျဆုံးနှင့်အခြေခံချုံ့စက်များဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် eli အတွက်အသုံးပြုသောညှပ်ညှပ်ဖြတ်ညှပ်ခြင်း၏တိုက်ရိုက်အတွဲဖြစ်သည်minaအပိုဆောင်းပုံစံများအတွက် te အရှည်။ ထိုနည်းတူစွာပင်အလှပြင်ဆိုင်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ကွဲပြားခြားနားသောအရာများကိုဖြတ်တောက်နိုင်သည်။ ထို့အပြင် DIY အလှပြင်သူများအတွက်ဆံပင်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ဖိနပ်တစ်စုံသည်ရရန်အဓိကကိရိယာဖြစ်သည်။ ဆံပင်ညှပ်ဆံညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်နှာစုံတစ်စုံကိုရှာဖွေနေသောဆံပင်ညှပ်သမားများသည်ထိုနည်းအတိုင်းပင်အထောက်အကူဖြစ်စေလိမ့်မည်။
Texturizing ကတ်ကြေးဖြေ - ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသောဆံပင်ညှပ်စက်သည် texturizing shears ဖြစ်သည်။ ဤရွေ့ကား, ကတ်ကြေးများကဲ့သို့အစီအစဉ်ရှိသည်, ဒါပေမယ့်တ ဦး တည်းချွန်ထက်အစွန်းတ ဦး တည်းဆံပင် snatch သောသွားရှိပါတယ်။ ၎င်းတွင်သွား ၇ ခုမှ ၁၆ ခုအထိရှိနိုင်ပြီးအများအားဖြင့်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်သာညှပ်များကိုထည့်။ စဉ်းစားနိုင်သည်။ ၎င်းကိုအခြေခံအားဖြင့်အီလီမပါဘဲဆံပင်ကိုညှပ်ရန်အတွက်အသုံးပြုသည်minating length ။
လှည့်ကတ်ကြေး: ဆုံလည်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်များသည်ဖောက်သည်လေးယောက်အပေါ်ဖိအားလျော့ကျစေရန်ထပ်မံအသုံးပြုသည်။ carpal passage disorder နှင့်ငြီးငွေ့သော strain ဒဏ်ရာခံစားနေရသောသူတို့အဘို့သင့်လျော်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောကတ်ကြေးနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောလက်ချောင်းများကိုအခြားတစ်ခုနှင့်တစ်ခုတွေ့ရသည်။ အလှည့်အကျီများသည်အစွန်းနှင့်ချိတ်ဆက်နေသောအလှည့်အပြောင်းတစ်ခုရှိသည်။ ပိုများသောမကြာခဏမထက်, လက်မပိုမိုကန့်သတ်ခြင်းနှင့်အကျိုးရှိနှင့်ပိုပြီးဝိသေသဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများအတွက်ကြံစည်။
ပါးလွှာသောကတ်ကြေး: အခြားယန္တရားဖြစ်သော်လည်းပါးလွှာသောကတ်ကြေးများကိုပုံမှန်အားဖြင့် texturizing shear များဖြင့်ကုန်သွယ်သည်။ ယေဘူယျအားဖြင့် gapped သွားများဖြင့်ကတ်ကြေးထိုးသည့်ကတ်ကြေးနှင့်လုံးဝမတူပါ။ ဒီကို eli အတွက်အသုံးချသည်minaဒြပ်ထုအချို့သည်ကတ်ကြေးအချို့ပြုလုပ်ထားသောအောက်လိုင်းများနှင့်ရောနှောနေစဉ်။
ရှည်လျားသောဆံဓါးကတ်ကြေး: Long-Blade ညှပ်သည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောချုံ့ကိရိယာများဖြစ်သည်။ ဆံပင်နှင့်ဆံပင်အလှပြုပြင်သူများအတွက်တူညီသောတန်ဖိုးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤရွေ့ကားကတ်ကြေးများပုံမှန်အားဖြင့်6မှ 7.5 လက်မအရှည်ဖြစ်ကြပြီးကျယ်ပြန့် brush နည်းစနစ်များအတွက်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်တစ်ချိန်တည်းတွင်ညှပ်ဖြတ်ရသောကြောင့်ကြမ်းတမ်းသောဖြတ်တောက်ခြင်းနည်းလမ်းများအတွက်လည်းအလားတူဖြစ်သည်။
တိုတောင်းသောဆံပင်ညှပ်သမားဓါး: အတိုချပ်ချပ်ချပ်ချပ်များကိုအလှဆင်သူများကပိုမိုပေါ့ပါးသောကြောင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောထိန်းချုပ်မှုပေးသောကြောင့်လက်ဖြင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုလျော့နည်းစေသည့်အလှကုန်သမားများကထိရောက်စွာအသုံးပြုနိုင်သည်။ တိုတောင်းသော Blade ဆံပင်ကတ်ကြေးများသည်အရွယ်အစား ၄ လက်မမှ ၅.၅ လက်မအထိရှိသည်။ ၎င်းသည်အလှအပအလှအပအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။
လက်ဝဲလက်ကတ်ကြေးဖြေ - နောက်ဆုံးကအနည်းဆုံးတော့ဘယ်လက်ဝဲကတ်ကြေးတွေရှိတယ်။ ဤရွေ့ကားထုံးစံ, လက်ျာဘက်ပေးသောဒီဇိုင်းများထက်အမျိုးမျိုးသောလက်ကိုင်ဒီဇိုင်းများနှင့်အတူစီစဉ်ထားရှိပါသည်။ ပိုမိုရိုးရှင်းပြီးပိုမိုထိရောက်သောဖြတ်တောက်မှုအတွက်လက်ဝဲလက်ကိုကိုက်ညီစေရန်လက်ကိုင်များကိုပြုလုပ်သည်။
နောက်ထပ်ဖတ်ရန်: ကွဲပြားခြားနားသောဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးအမျိုးအစားများ, ဒီမှာ!
သေးငယ်တဲ့ကတ်ကြေး: ၄.၅ လက်မမှ ၅.၅ လက်မအကြားရှိသည်။ သေးငယ်တဲ့ကတ်ကြေးမှာဆံပင်ဖြတ်တဲ့အခါပိုတိကျစေတဲ့ဓါးတိုလေးတွေရှိတယ်။
ပိုရှည်ကတ်ကြေး ၎င်းတို့သည် ၆ လက်မမှ ၈ လက်မအကြားရှိသည်။ ပိုရှည်သောကတ်ကြေးများတွင်ဓါးသွားများပိုများလေ့ရှိပြီးများသောအားဖြင့်ဆံပင်ညှပ်သူများအသုံးပြုကြသည် ဖြီးနည်းစနစ်ကျော်, နှင့်လျင်မြန်စွာဆံပင် trimming များအတွက်အသုံးဝင်ပါသည်။
ဆံပင်အလှပြုပြင်သူများ၊ ဆံပင်ညှပ်သူများ၊ ဆံပင်ညှပ်သမားများနှင့်အိမ်တွင်ဆံပင်ညှပ်ရန်အသုံးပြုသောကတ်ကြေးအရွယ်အစားသည် ၆ "ဖြစ်သည်။
ဤအချက်များအရသင့်အတွက်မှန်ကန်သောကတ်ကြေးများကိုရွေးချယ်သောအခါသင်၏လက်ချောင်းနှင့်အနားရှိကတ်၏အရှည်နှင့်သင်၏လက်ဖ ၀ ါးပေါ်ရှိကတ်ကြေး၏အရှည်ကိုခန့်မှန်းရန်အကြံပြုသည်။ ထူးခြားသည်မှာကတ်ကြေးအများစုသည် ၄.၅ မှ ၈ အထိအထိကျယ်ပြန့်သည်။
အိမ်မှာဆံပင်ညှပ်ဖို့ဘယ်လိုကတ်ကြေးအမျိုးအစားကိုသင်လိုအပ်ပါသလဲ။ သံမဏိကိုသုံးပြီးချွန်ထက်သောပြားချပ်ချပ်၊ ကွေးကောက်သို့မဟုတ်ခုံးအဆံရှိရိုးရှင်းသောဖြတ်တောက်နိုင်သောကတ်ကြေးတစ်စုံစုံသည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
အိမ်မှာဆံပင်ညှပ်ဖို့အတွက်ဒေါ်လာ ၅၀၀ ကိုကတ်ကြေးတစ်စုံနဲ့မသုံးသင့်ဘူး။ အိမ်တွင်ဆံပင်ညှပ်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးကတ်ကြေးများစာရင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အတူတကွစာရင်းပြုစုထားသည်။
(အကောင်းဆုံးအိမ်သုံး Scissor) Umi ဆံပင်ညှပ်ဖြတ်
(အကောင်းဆုံးအိမ်သုံး Scissor Set) Timeless ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်ပါးလွှာခြင်းအစု
Mina Matte က Black ဖြတ်တောက်ခြင်းကတ်ကြေး
Jaguar ပန်းရောင် Pre Style Ergo
Ichiro ဖြတ်တောက်ခြင်းကတ်ကြေး Relax
သင်သြစတြေးလျ၊ အမေရိကန်၊ ကနေဒါသို့မဟုတ်ဥရောပ၌ဖြစ်စေပဲဆံပင်အလှပြုပြင်သည့်ကတ်ကြေးတံဆိပ်တံဆိပ်များသည်ဂျပန်မှဖြစ်သည် ဂျာမနီ.
အဘယ်အရာကဆံပင်ကတ်ကြေးတံဆိပ်တုံးဖြစ်စေသနည်း။ အွန်လိုင်းကတ်ကြေးတစ်စုံ ၀ ယ်သောအခါသင်မည်မျှယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ပေးသောကြောင့်အဓိကအချက်မှာအမြဲဂုဏ်သိက္ခာဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံးအမှတ်တံဆိပ်များသည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောပစ္စည်းများ၊ ဆံပင်ညှပ်ရန်အတွက်ပြီးပြည့်စုံသောချွန်ထက်သောအနားများကိုအသုံးပြုသည်၊ နှစ်နှင့်ချီ။ အသုံးပြုသည်။
အတိုချုပ်ပြောရလျှင်၊ ကျွမ်းကျင်သူများအတွက်သို့မဟုတ်အိမ်သုံးအတွက်အကောင်းဆုံးဆံပင်ကတ်ကြေး (၁၀) ခုရှိသည်။
(အကောင်းဆုံးအရည်အသွေး & တန်ဖိုး) Juntetsu ကတ်ကြေး
(အကောင်းဆုံးဂျာမန်) Jaguar ကပျကြေး
(အကောင်းဆုံးထူးခြားသောဒီဇိုင်းများ) Kamisori ညှပ်
(အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေး) Fuji MoreZ ကပျကြေး
(အကောင်းဆုံးဘက်စုံ) Joewell ကပျကြေး
(အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း) Ichiro ကပျကြေး
(Best Beginner & Home-Use) Mina ကပျကြေး
ဆံပင်အလှပြုပြင်သူများ၊ ဆံပင်ညှပ်သူများ၊ ဆံပင်အလှပြင်ဆရာများ၊ အစပြုသူများနှင့်အလုပ်သင်များသို့မဟုတ်အိမ်တွင်းသုံးပစ္စည်းများအတွက်သင်အကြိုက်ဆုံးအမှတ်တံဆိပ်ဆံပင်အလှပြုပြင်စရာကတ်ကြေးများကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ဖူးပါကကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ။
မီးဖိုချောင်၊ ထည်နှင့်လက်မှုပစ္စည်းကတ်ကြေးများမှာအလွန်ကြီးသောလက်ကိုင်များရှိပြီးသင်ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်ဆုတ်ဖြဲခြင်းအတွက်ပိုမိုအားဖြည့်ပေးရန်လိုအပ်သည်။ ဆံပင်ကိုညှပ်။ ဆံပင်ကိုညှပ်။ ညှပ်ထားသောဆံပင်ပုံစံကဆံပင်ကတ်ကြေးသေးသေးလေးဖြစ်သည်။
သင်ကသာမန်ကတ်ကြေးများကိုအသုံးချနိုင်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းတို့သည်ချွန်ထက်သော်လည်းချောမွေ့နေသည့်ဆံပင်မည်မျှကြာရှည်မည်ကို မူတည်၍ သင်၏ဆံပင်ကိုလှည့်ဖျားခြင်းမဟုတ်ဘဲအများစုမှာမရိုးရှင်းလျှင်၎င်းသည်ကတ်ကြေးများကြောင့်အချိန်အနည်းငယ်ကြာနိုင်သည်။
သင်၏ဆံပင်ကိုစကတ်၊ ကတ်ထူပြား၊ စက္ကူကဲ့သို့သောအရာများကိုဖြတ်တောက်ရာတွင်အသုံးပြုလေ့ရှိသောကတ်ကြေးများဖြင့်သင့်ဆံပင်ကိုချုံ့ခြင်းဖြင့်သင်၏ဆံပင်၏ပိတ်ပစ်မှုကိုထိခိုက်စေပြီးခွဲစိတ်စေနိုင်သည်။ သူတို့သည်ပုံမှန်အားဖြင့်ပုံစံညှပ်များကဲ့သို့ချွန်ထက်။ မဖြတ်မီဆံပင်အတော်များများရှိသည်။
ထိုနည်းတူစွာပင်ကတ်ကြေးနှင့်ဖြောင့်ဖြတ်ရန်ခက်ခဲသည်။ ဆံပင်ကမချွန်ပါဘူး၊ သူတို့ကိုပိတ်ထားလိုက်တာနဲ့ဆံပင်တိုင်းကိုဆံပင်ညှပ်လိုက်တာနဲ့ဆံပင်ကိုညှပ်လိုက်တာကဆံပင်ကိုညှစ်ထုတ်လိုက်တာပဲ။
ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးများနှင့်အခြားဆံပင်သို့မဟုတ်ဆံညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်များအားလုံးသည်ဆံပင်ညှပ်ခြင်းနှင့်ပုံစံပြုခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးဓါးသွားများထုတ်လုပ်သည့်ပစ္စည်းများ (သံမဏိ) ကြောင့်စျေးကြီးကြသည်။
ဒေါ်လာ ၁၀၀ အောက်ရှိစျေးသက်သာသောဆံပင်ကတ်ကြေးသည်ပုံမှန်အားဖြင့်စျေးပေါသောသံမဏိကိုသုံးပြီးသင့်ဆံပင်ကိုဆုတ်။ ပျက်စီးစေသည်။ ဖြတ်တောက်ခြင်းအစွန်းသည်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းနှင့်ဆံပင်ညှပ်ခြင်းအတွက်မလုံလောက်ပါ။
နောက်ထပ်ဖတ်ရန်: Why ဆံပင်ကတ်ကြေးကဒီမှာအရမ်းစျေးကြီးတယ်!
ဆံပင်ကတ်ကြေးကိုအလုပ်သို့မဟုတ်အိမ်တွင်အသုံးပြုရန်ခြောက်သွေ့နေစဉ်အသုံးပြုရန်မရည်ရွယ်ပါ။ တစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်တစ်ချိန်တည်းတွင်အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောကတ်ကြေးထည့်ထားသောဆံပင်ကိုကပ်ပါ။ ဤအရာသည်သင်၏ကတ်ကြေးများကိုဆံပင်ညှပ်ခြင်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးသံချေးတက်ခြင်းမှရပ်တန့်စေပြီး၎င်းတို့သည်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
သင်၏ဆံပင်ကတ်ကြေးများကိုစုပ်ယူရန်၊ သုတ်ခြင်းနှင့်ဆေးကြောခြင်း၊ အပျက်အစီးများသို့မဟုတ်တည်ဆောက်မှုများအားလုံးကိုသုတ်လိမ်းပြီးသုတ်ပစ်ရန်အတွက်နွေးသောရေကိုသုံးပါ။ ထို့နောက်ခြောက်သွေ့စေပါ။
ပိုမိုစျေးကြီးသောကတ်ကြေးများဖြစ်လာသည်၊ မှတ်သားရန်ကြိုးစားပါ၊ ပို၍ ပျက်စီးလွယ်ပြီးပျက်စီးလွယ်နိုင်သည်။
ဆံပင်ကတ်ကြေးကိုအစွန်အဖျားရှိဖို့ဆိုရင်တော့သူတို့ဟာစတီးလ်ကိုခိုင်ခံ့အောင်လုပ်ထားရတယ်။ သံမဏိတွေပိုခိုင်မြဲလေလေ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပျက်စီးမှုကြောင့်အက်ကွဲဖို့ပိုလွယ်လေလေဖြစ်တယ်။
အလွန်အစွမ်းထက်သည့်အစွန်းရှိကတ်ကြေးများကကြမ်းပြင်ပေါ်သို့မဟုတ်မာကျောသောမျက်နှာပြင်များပေါ်သို့ကျစေခြင်းဖြင့်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ ဆံပင်ညှပ်သမားများ၊ ဆံပင်အလှပြင်သူများ၊ ဆံပင်အလှပြင်သူများနှင့်အလှအပပညာရှင်များသည်သူတို့၏စျေးကြီးသောကတ်ကြေးများကိုကာကွယ်ရန်အိတ်တစ်လုံး၊ အိတ်၊ holster သို့မဟုတ်ကတ်ကြေးပိုက်ဆံအိတ်ကိုအသုံးပြုကြလိမ့်မည်။
ချေးခြင်း (သံချေး) သို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပျက်စီးခြင်းမှမည်သည့်ပျက်စီးမှုမှကာကွယ်ရန်ကတ်ကြေးသို့မဟုတ်အိတ်ထဲတွင်ကတ်ကြေးများကိုအမြဲတမ်းခြောက်သွေ့အောင်ထားပါ။
ဖြတ်တောက်ခြင်းကတ်ကြေးဒေါ်လာ ၁၀၀ မှ ၅၀၀ ကြားဖြစ်သည်
ပါးလွှာသောကတ်ကြေးများသည်ဒေါ်လာ ၁၀၀ မှ ၅၀၀ ကြားဖြစ်သည်
သံမဏိကတ်ကြေးများသည်ဒေါ်လာ ၁၀၀ ဖြစ်သည်
440c သံမဏိကတ်ကြေးများ $ 200 + ဖြစ်သည်
VG10 သံမဏိကတ်ကြေးများသည်ဒေါ်လာ ၃၀၀ + ဖြစ်သည်
ကိုဘော့သံမဏိကတ်ကြေးဒေါ်လာ ၆၀၀ + ဖြစ်သည်
အလုပ်သင်သို့မဟုတ်ကျောင်းသားဆံပင်ညှပ်သမားများနှင့်ဆံသသမားအသစ်များအတွက်တစ်စုံအတွက်ဒေါ်လာ ၁၀၀ မှ ၂၅၀ အကြားသို့မဟုတ်ဖြတ်တောက်ခြင်းသို့မဟုတ်ပါးလွှာသောကတ်ကြေးအတွက်ပေးဆပ်ရန်မျှော်လင့်နိုင်သည်။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆံပင်အလှပြုပြင်သူများနှင့်ဆံသသမားအတွက်ဖြတ်တောက်ခြင်းသို့မဟုတ်ပါးလွှာသောကတ်ကြေးတစ်စုံအတွက်ဒေါ်လာ ၁၅၀ မှ ၁၀၀၀ ကြားအထိရှိသည်။
အကယ်၍ သင်သည်တစ်သက်တာလုံးရေရှည်ရရှိမည့်ပရီမီယံစုံတွဲကိုရှာဖွေနေပါကသင်သည်ဒေါ်လာ ၅၀၀ ကျော်ပေးချေလိမ့်မည်!
လျင်မြန်။ စျေးပေါသောအစားထိုးမှုအတွက်ဆံပင်ညှပ်သမားများသည်ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်ပါးလွှာသောကတ်ကြေးများအတွက်ဒေါ်လာ ၁၅၀ ပေးလေ့ရှိသည်။
ဒါကြောင့် "ဆံပင်ညှပ်ဖြတ်ခြင်းအတွက်သင်ဘယ်လောက်ပေးလဲ" ဟုမေးသောအခါ၎င်းတို့သည်ဒေါ်လာ ၁၀၀ မှ ၃၀၀ ကြားတွင်ရှိသည်။ ဤအရာသည်သင့်အားအရည်အသွေးမြင့်ဆံပင်ညှပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ပါးလွှာစေခြင်းနှင့် texturising ကတ်ကြေးများကိုရရှိစေသည်။
ဆံပင်ညှပ်နည်းစနစ်များနှင့်အတူအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆင့်မြင့်ဆံပင်ညှပ်ဖြတ်ကြေးကတ်များအတွက်ဘာဘာကတ်ကြေးကဒေါ်လာ ၁၅၀ မှ ၃၀၀ ကြားကုန်ကျသည်။
အကြောင်းဖတ်ပါ။ အကောင်းဆုံးအလုပ်သင်၊ ကျောင်းသားနှင့်အတန်းအဆင့်ကတ်ကြေးများ!
Professional Premium barber scissors များသည်ဒေါ်လာ ၅၀၀ ခန့်ကုန်ကျပြီးအများအားဖြင့် 500D ခေါက်ရိုးရှင်းသောဓါး၊ Offset ergonomics နှင့်အရည်အသွေးမြင့်သံမဏိများပါရှိသည်။
ဆံပင်အလှပြုပြင်သူများသည်ဆံပင်ကိုအလွယ်တကူဖြတ်တောက်နိုင်သည့်၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ergonomics ရှိပြီးရှည်လျားသောကြာရှည်သည့်ကာလကိုရရှိရန်မျှော်လင့်ကြသည်။ ဒီဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးများသည်ကြာရှည်ခံလေလေသံမဏိအရည်အသွေးမြင့်လေဖြစ်သည်။
ကွဲပြားခြားနားသောစတိုင်များနှင့်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းဆိုင်ရာကတ်ကြေးများကိုကိုင်တွယ်ရန်နည်းလမ်းအနည်းငယ်ရှိသည်။ သို့သော်အများဆုံးနည်းလမ်းမှာအနောက်တိုင်းရိုးရာဖြစ်သည်။ ဆံပင်ကတ်ကြေးကိုကောင်းကောင်းကိုင်ထားခြင်း၏ကောင်းကျိုးများမှာသင်သည်သင်၏လက်ကောက်ဝတ်နှင့်လက်ချောင်းများကိုဖိအား ပေး၍ ဆံပင်ညှပ်နေစဉ်သင့်အားလက်ကိုပိုမိုတည်ငြိမ်စေသည်။
ကတ်ကြေးချိတ်ကိုမျက်နှာကြက်ဆီသို့အထက်သို့မျက်နှာမူထားပါကသင်၏နေရာကိုထားပါ လက်သူကြွယ် သေးငယ်တဲ့လက်ချောင်းအပေါက်၌တည်၏။
ဆံပင်ကတ်ကြေးကိုဖွင့ ်၍ ပိတ်ရန်သင်၏လက်မကိုအသုံးပြုပါ
အောက်တိုဘာလ 07, 2021 ဖတ်ပြီးသားမိ 2
စက်တင်ဘာလ 26, 2021 ဖတ်ပြီးသားမိ 2
စက်တင်ဘာလ 26, 2021 ဖတ်ပြီးသားမိ 4